IIFOWUNI KUHLAZIYO LWE-APPLE TV + | AMABHONGO KODWA AYIYIYO EYANTLANDLOLO NGOKUPHELELEYO - IRADIO TIMES - UMDLALO WEQONGA
Iifowuni ezikwi-Apple TV + zinamabhongo kwaye zineenkwenkwezi- kodwa ayisiyonto yokuqala
3.0 ngaphandle kweenkwenkwezi ezi-5
Xa umhlobo ka-Albert Einstein wexesha elide kunye nomlingane wakhe uMichele Besso wasweleka ngo-1955, u-Einstein wabhala ileta eya kusapho olwalusentlungwini oluquka isicatshulwa esasibangel 'umdla ngokukhethekileyo malunga nohlobo lwexesha: Ngoku, umkile kweli hlabathi lingaqhelanga ngaphambili. Oko akuthethi nto. Abantu abafana nathi, abakholelwa kwi-physics, bayazi ukuba umahluko phakathi kwexesha elidlulileyo, langoku nelizayo yinto engekhoyo eqhubekayo.
Kukho imizekelo emininzi ngaphakathi kwenkcubeko ye-pop yemidlalo yeTV kunye nemiboniso bhanyabhanya edlale ngeenxa zonke ngayo yonke into engaqhelekanga, echaphazela umbono ka-Einstein malunga nexesha lokukhohlisa. Kule mpelaveki sifumana enye: ziifowuni, umdlalo weqonga lesithoba ovela kwi-Apple TV + nge-19 ka-Matshi ethe ekugqibeleni yaphosa umngxunya ongekhoyo kwaphela oyintsusa obandakanya umba wokuphambuka, kunye nohlobo lwesithuba sexesha esiphikisayo isongela ukuphela kwezinto zonke.
Zonke iziqendu ezisithoba zomboniso ziya kufumaneka ukuba uzinkcinkce kwangoko kubabhalisi be-Apple TV +. Kodwa kanye kwibhanti, kufuneka kubonakaliswe imiqolomba embalwa ngalo mboniso ubalaseleyo.
Okokuqala, ayisiyiyo nje into yesifundo esenza ukuba iiFowuni zibe yenye yezona zinto zibalaseleyo kwimiboniso yeqonga nangaliphi na iqonga lokusasaza ngoku. Phambi kokuba ababukeli bonwabele (okanye bangawonwabisi) umxholo okuwo, kufuneka baqale bazincome kolu ngcelele 'ifomathi ye-idiosyncratic.
Njengoko isihloko sichaza, ngokoqobo wonke umboniso uqulethwe ngomsindo orekhodiweyo weefowuni ezenzelwe umbukeli. Ikhatshwa yindawo ebambekayo, imbonakalo yesimbo seMatrix, umbukeli unokumamela kwaye afunde ingxelo ebhaliweyo yazo zombini iziphelo zomnxeba ngamnye. Yile nto uza kuyenza kulo lonke uthotho, yile ndlela uziswa ngayo kumlinganiswa ngamnye kunye nebali labo, kwaye kungenxa yeso sizathu sodwa iApple TV + ithatha into enobungozi kule projekthi ivela kwiimveliso zeStudiocanal kunye neBad Hombre, Ngokudibana neCanal +.
Ngokukhawuleza nje ukuba uyiqonde into yokuba iifowuni 'iziqendu ezisithoba ziqala ubude ukusuka kwimizuzu eli-13 ukuya kwimizuzu engama-21-ukwenza lonke ixesha lokuqala lomboniso ngaphezulu nje kweeyure ezingama-2.5 ubude-kunokuzisa engqondweni umlilo omangalisayo weQuibi, ngokufanayo thaca iziqendu zeTV njengezinto ezilinganayo zokuluma kwaye zidlalwa zijikeleza ngefomathi kunye nembono.
Ngapha koko, umgxeki unokujonga kulo mboniso njengesizathu sokutshixa ukunika abadlali into abanokuyenza. Enye indlela yokuchaza into yokuba i-cast apha iquka iinkwenkwezi ezibalaseleyo ezinje ngoLily Collins, Rosario Dawson, Pedro Pascal, Aubrey Plaza, no Karen Gillan, kwaye konke ekucelwa ukuba bakwenze kukuzivumela ukuba barekhodwe benze umnxeba. ngesimilo?
Le yinxalenye apho kufuneka siqaphele ukuba iifowuni ngumboniso onamava kunye nemibono embalwa kwangaphambili njengoko kunokwenzeka. Ukwenza ngenye indlela iya kuba kukumosha ukutyhilwa okukhulu okuza kuvela kumdlalo wokugqibela (obizwa ngokuba, 'Ngaba Sikhona Isazinzulu Kwinqwelomoya?'), Kwaye kungcono kakhulu ukushiya ababukeli beqikelela ukuba onke amabali angafaniyo kwezi iminxeba iqhagamshelwe okanye hayi.
Thina unako Thetha ngokubanzi malunga nomboniso ngaphandle kokuwonakalisa nabani na - ngokuqaphela, umzekelo, ukuba inyathela umhlaba ofanayo njengemiboniso bhanyabhanya efana nonyaka ophelileyo Umgaqo . Uyayikhumbula intetho ekupheleni komlinganiswa kaRobert Pattinson? Yiyo apho acinga khona ukuba kwenzeke ntoni, kwenzeka, ngaphambi kokwenza into ebonakala ngathi iyaphikisana malunga nendlela eso ayisosizathu sokungenzi nto.
Kwiifowuni, abalinganiswa abasuka kwisibini esitshatileyo esinommelwane ongacacanga ukuya kwisibini esitshatileyo esibeka ulwalamano lwaso elugcinweni njengoko elowo elandela amathuba kwizixeko ezahlukileyo efumana ithuba lokutshintsha amaxesha abo nakwabanye abantu. Ukuqiniseka, oku kuyimbali ebaliweyo yokundwendwela ixesha lokuhamba. Ukuba unethuba lokubuyela umva ngexesha kwaye ubulale uHitler, umzekelo, ungalithatha? Uninzi lwabantu ngekhe luthandabuze ukuthi ewe-ude ukhumbule ukuba uHitler kunye namaNazi, eneneni, baphulukana neMfazwe yesibini yeHlabathi, kwaye badlala ngokulandelelana kweziganeko ezikhokelele kwinyani leyo, enyanisweni, zinokudala isiphumo esibi ngakumbi.
Abanye babalinganiswa kwiiFowuni, kule migca inye, banikwa ulwazi lwangaphambili (okanye, ngokuchanekileyo, ulwazi oluvela kwikamva) ngendlela umntu omthandayo aza kufa ngayo. Ngaba ungangenelela ukuhlangula lowo umthandayo? Sonke mhlawumbi singathanda, ngaphandle kokuba uyakholelwa ukuba okwenzekileyo, kwenzekile, kwaye ukuba ayivumeli okanye ayivumelekanga, indalo iya kulungisa ide iyenze. Kwaye loo nto iya kuthi ibange amaxhoba ayo, ngendlela enegazi okanye enye.
Musa ukungaqondi kakuhle, nangona kunjalo; ayisiyomboniso malunga nokuhamba kwexesha. Iifowuni zidlala ngokujikeleza ngokuqonda kwakho kwexesha, uninzi lwethu oluthandekayo, olulungileyo.
Ngokungafaniyo nendlela u-Einstein azibeka ngayo izinto kwisicatshulwa esingentla, uninzi lwethu aluchazi ixesha hayi ukuba liyintoni, kodwa ukuba lilinganiswa njani. Abanye abantu, ixesha kukuqokelelwa kwemizuzwana, iiyure, iintsuku, iiveki, iinyanga neminyaka. Okanye umda weziganeko uye kwelinye lamabhakethi amathathu (edlulileyo, yangoku, okanye yexesha elizayo). Xa umboniso onje ngeeMnxeba unikezela ngabalinganiswa ababonakala ngathi bahlala kumaxesha ahlukeneyo- njengomqhubi wenqwelomoya wenqwelomoya kwinqaku elinye, umzekelo, owenza umnxeba ongxamisekileyo okwangoku kumagosa omhlaba kwixa elizayo-kunokubonakala ngathi kuyathandeka kakhulu ukuthatha nzulu.
Kodwa ukucela ababukeli ukuba bayimise ingcinga yabo esele ikhona malunga nazo zonke ezi ngcinga njengoko bebukele (okanye, endaweni yoko, bamamele) kumabali adlalwayo yile nto yenza umboniso ofana neefowuni ubandakanyeke kamnandi- ukuba, kwaye yinto enkulu, kubalulekile ukuba, unako dlula kwii-quirks zefomathi.
Sukuba nexhala ngokuqonda konke oku emva kokuntywila ngqo kumdlalo, ngendlela. Iziqendu zokuqala zeefowuni ziya kukwenza ucinge ukuba yenye into, xa iyenye into. Thatha ngesantya sakho-kuba ukuba ii-coronavirus lockdowns zisifundise nantoni na, kukuba sonke asinanto ngaphandle kwexesha. Nokuba kuthetha ntoni oko.
Iifowuni ziphehlelela i-Apple TV + nge-19 kaMatshi ngo-2021. Jonga konke ukusasazwa kweDrama, okanye ujonge isikhokelo sethu seTV ukufumanisa ukuba yintoni kumabonwakude ngokuhlwanje.
iManchester United vs iTottenham live umsinga
ngumsebenzi osekelwe kumabali okwenyaniso
yimalini inetflix ngenyanga uk
yandisa intliziyo emfusa
alchemy encinci 1 cheats